6 andro taorian’ny nahalavo an’i Fredo : voasambotry ny polisy tany Farafangana i Lejao | NewsMada
6 andro taorian’ny nahalavo an’i Fredo : voasambotry ny polisy tany Farafangana i Lejao
Mitohy, mihazakazaka ny fanadihadiana sy famotorana mikasika ny “Raharaha kidnapping Arnaud”. 6 andro taorian’ny nahalavoan’ny polisy an’i Fredo, tany Toamasina, voasambotry ny polisy tany Farafangana, omaly, koa Rajaofenoarinaivo, fantatra amin’ny solon’anarana hoe Lejao na koa Ramasa, iray ami’ireo mpaka an-keriny tena nahery vaika tamin’ity raharaha ity.
Voasambotra tany Farafangana ny alahady teo i Lejao, iray amin’ireo mpanao kidnapping nokarohina manodidina ny raharaha Arnaud. Araka ny fanazavana avy amin’ny polisy, tany amin’ny vadiny no nahasamborana azy io. Ny 24 desambra lasa teo izy no nitsoaka niala tany Toamasina ary namonjy ny vadiny tany Farafangana. Taorian’ny angom-baovao nataon’ny polisy no nahalalana fa any an-toerana izy. Rehefa natao ny fandehanana tany amin’ny toerana voatondro, tratra tokoa ny lehilahy. Nampiakarina aty Antananarivo avy hatrany ity farany omaly. Ny polisin’ny BC Anosy no naka azy any an-toerana, ary efa tokony ho tonga anio.
Araka ny fanazavana ihany, voaporofo fa nifandray an-telefaonina tamin’i Fredo, ilay jiolahy iray matin’ny polisy nandritra ny fanavotana an’i Arnaud tany Toamasina, ny herinandro lasa teo i Lejao. Anisan’ny MOP (main d’oeuvre pénale) ihany koa izy ity, ary izany no nahafahany nanatanteraka fakana an-keriny, hoy ny polisy.
Andanin’izany, voalaza fa nalefa any amin’ny fonjan’ambatolampy ireo 27 mianadahy voarohirohy amin’ny fakana an-keriny an’i Arnaud sy Annie nalain’ny prezidansa tany Toamasina farany teo. Hiatrika ny fitsarana tsy ho ela ireo. Milaza ny minisitry ny Filaminana anatiny fa tsy maintsy ho fantatra ny anaran’ireo tompon’antoka amin’ity fakana an-keriny ity.
Notolorana fahankasitrahana ny kaomisera, Rakotovao Jean Christian
Azo ho sokajiana ho olomalaza tampoka tamin’ ity fiandohan’ny taona ity ny komisera misahana ny polisy etsy amin’ny boriborintany voalohany Tanambao faharoa, Rakotovao Jean-Christian, noho izy nahavotra velona an’ i Arnaud izay notanan’ ireo jiolahy mpaka an-keriny nandritra ny 50 andro. Notoloran’ ny ray aman-drenin’ ity ankizilahy ity valisoa ity komisera ity sy ireo polisy maro niara-niasa taminy ka nahatanteraka ny fanavotana an’ i Arnaud nandritra ny lanonam-pianakaviana nokarakarain’ny teraka Maroantsetra ny asabotsy teo. Nitantara ny fijaliana nanjo azy nandritra io 50 andro teo am-pelatanan’ny mpaka an-keriny i Arnaud. Miandry izay mety ho tohin’ny fanadihadiana momba ireo basy maro be kosa ny rehetra.